Daawo Munaasabad Lagu Xusayay Maalinta Farta Soomaaliga La Qoray Oo Cadaado Lagu Qabtay |
Daawo Munaasabad Lagu Xusayay Maalinta Farta Soomaaliga La Qoray Oo Cadaado Lagu Qabtay
Munaasabadani oo lagu maamuusayay 42-sano guuradii ka soo wareegtay hirgalinta Farta Soomaaliga oo lagu qabtay Hotel Central ee magaalada Cadaado ayaa waxaa soo abaabulay Ururka horumarinta waxbarashada Ximan iyo Xeeb ee HEDO, iyadoo ay ka soo qayb galeen madax ka tirsan maamulka Ximan iyo Xeeb, iyo qaybaha kale duwan ee bulshada.
C/qaadir Maxamed Cali Ishkin waxa uu muddo dheer ka tirsanaa Akademiyadii qaabilsaneed horumarinta Afka iyo Suugaanta isagoo sheegay in dadaalka farta Soomaaligu uu soo socday tan iyo qarnigii 20-aad bilowgiisii, balse la hirgaliyay oo lagu shaqeeyay 21-dii January 1973-dii, markaasi oo xafiisyada dowladu ku wada xiriireen, uuna ku soo baxay wargeyskii ugu horeeyey.
Xoghayaha waxbarashada iyo ciyaaraha maamulka Ximan iyo Xeeb Axmed Xuseen Khayre ayaa sheegay in deegaanada ay maamulaan ay ka sameeyeen 2012-dii ilaa 2014-tii biliha June iyo Julay, dhulka miyiga ah, ayna qorista far soomaaliga ku bareen dad ka badan 10,000 oo qof oo dad waaweyn u badan.
Wasiirka arrimaha gudaha Maamulka Ximan iyo Xeeb Maxamed Xaaji Xuseen ayaa sheegay in hadda Carruur badan oo dhalatay waqtigii burburka aysan helin fursad waxbarasho, taas oo uu sheega inay keeni karto in cadadka dadka aan wax qorin bataan, hadii aan dadaal la samaynin.
Af-soomaaliga ayaa looga hadlaa dhul badan oo ka mid ah bariga Afrika, inkastoo qoraalkiisu uusan helin horumarin ku haboon..